Idaacadaha Shabakadaha - Idaacadaha Shabakadaha
Bogga ugu weyn / raadiyayaasha / Idaacadaha Shabakadaha
Sort by caanSort rating celcelis byKala soocaan ugu dambeynSort by qiimaha: hooseeyo si ay sareSort by qiimaha: sare si ay u hooseeyaSort by Rank Sales
Muujinaya 1-16 ee natiijooyinka 33
Rfinder B1+ Dual Band DMR 4G/LTE + baytari bilaash ah oo bilaash ah
1327€ Ku dar gaadhigii
741€ iibso Hadda
Boxchip S900A + VHF ama UHF FM Analog / DMR 4G Taleefoonka casriga ah
Sale! 816€ 714€ fursadaha Select
510€ fursadaha Select
Sale! 510€ 459€ Ku dar gaadhigii
AnyTone AT-D578UVIIIPRO Tri-Band Amateur DMR Radio
408€ iibso Hadda
408€ fursadaha Select
Talkpod N58 3G / WiFi (Android quful)
Sale! 408€ 367€ fursadaha Select
Inrico S300 4G / Wifi (Android quful)
357€ fursadaha Select
Inrico TM-9 4G / WiFi IRN Shabakadda Moobilka Raadiyaha
Sale! 408€ 357€ fursadaha Select
Codka Raadiyaha RT4 4G / LTE WiFi + Microphone Gacmeed + Batariga Dheeraadka ah
qiimeeyay 4.67 out of 5
Sale! 459€ 357€ Ku dar gaadhigii
Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi (Android quful)
qiimeeyay 4.83 out of 5
357€ Ku dar gaadhigii
306€ iibso Hadda
305€ fursadaha Select
Inrico T320 4G / Wifi + BT mikrofoonka gacanta + Batariga Dheeraadka ah
Sale! 357€ 305€ fursadaha Select
305€ Ku dar gaadhigii
Wada shaqeeyayaasha taleefanka gacantu
Dhamaan idaacadaha shabakadeena waxay lashaqeeyaan wadayaasha GSM. Gudaha Mareykanka, waxay kaliya la shaqeyn doonaan AT&T (3G iyo 4G) iyo T-Mobile (3G). Ogsoonow in AT&T ay iibsan doonaan qandaraas kasta oo aad la gasho shirkadaha kale, si aad si fudud ugu beddeli karto shirkadda xamuulka ah. Raadiyeyaashu waxay sidoo kale ka shaqeyn doonaan helitaanka meel kasta oo WiFi ah.
Inrico T298s 3G / Wifi VHF Radio 137-174 MHz (Android quful) EU / UK / Australia
Desktop xeedho / Suction Cup Mount for RT4